38 Comments / Blog, raharaham-pitsarana / By Sarah
Ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia sampan'ny lalàna izay manarona ny fandikan-dalàna sy ny asa ratsy ataon'ny olona iray manohitra ny fanjakana. Ny tanjony dia ny fametrahana mazava tsara ny sisin-tany izay heverina fa tsy eken'ny fanjakana sy ny fiaraha-monina. Voafaritra tsara izany satria ny lalàna dia manilika ny fitondran-tena avela sy zakaina amin'ireo izay mandrahona, mampidi-doza ary manimba ny vahoaka. Ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia manasongadina ihany koa ny sazy tsy maintsy atrehin'ireo voafitaka.
Ireo karazana lalàna 5 momba ny heloka bevava any Dubai
Heloka bevava eto an-drenivohitra mitaky sazy an-tranomaizina mandritra ny androm-piainana. Ny vono olona sy fanolanana dia ohatra amin'ny heloka bevava eto an-drenivohitra. Ny heloka bevava an-tsokosoko dia nihevitra ny fikasan'ny olona hamono sy nahatafiditra ilay fihetsika izay nilaina ny hanaovana ilay asa mialoha.
fandoroana - ahitana fipoahana niniana na fananganana afo hanimba fananana. Ity dia sazin'ny fanagadrana matetika hatramin'ny 20 taona.
Fanararaotana zaza - resaka heloka bevava hafa indray. Ny fanararaotana zaza dia mety ho voaheloka mandritra ny taona an-tranomaizina
fakàna an-keriny - Ity raharaham-pitsarana momba ny heloka bevava ity dia mitranga rehefa azon'ny olona an-kery ny olona iray ary avotana. Ny trangana fakana an-keriny dia mahazo sazy henjana kokoa raha toa ka misy fakana ankeriny zaza tsy ampy taona sy fakana ankeriny mandritra ny fanendahana fiara.
Heloka amin'ny fankahalana - tafiditra ao anatin'ny fihetsika feno herisetra amin'ny olona samy hafa firazanana, fironana ara-nofo na ireo manana toetra hafa.
Zava-dehibe ny manamarika fa, any Dubai, ny fampanoavana dia tokony hahay tsara amin'ny teny Arabo; raha tsy izany dia mitadiava fanampiana avy amin'ny mpandika teny aorian'ny fianianana. Marihina fa tapitra ny asan-jiolahy. Ny fisintomana na ny fahafatesan'ilay niharam-boina dia hampihena ny asan-dahalo.
Mila mpisolovava afaka manampy anao hamakivaky ny lalanao ianao amin'ny alàlan'ny rafi-pitsarana heloka bevava ho anao hahazoana ny rariny sahaza anao. Satria raha tsy misy ny sain'ny ara-dalàna dia tsy hanampy ny traboina mila izany indrindra ny lalàna.
Eritreritra 38 momba ny “Karazanà tranga 5 momba ny heloka bevava any Dubai sy ny fomba hanampian'ny mpisolovava anao”